Shiinaha Heaveriest ahama Steel 3 PC kubada Madax-saaraha iyo qeybiye | Co-guul
rakiban ku dhafnaa
Home yaynana kolna Accessories
Heaveriest ahama Steel 3 PC Madax kubada
Qaabeeyaan No .: CW BV-3
Form Connection: dunta
Mode Wadista: Buugga
Cadaadiska rasmi ah: ANSI CLASS 150-900
Channel: toosan Iyada Type
Qaab dhismeedka: sabayn Ball Madax
Nooca: sabayn Ball Madax
Function: afuufa-Down Madax
Heerkulka: Heerkulka caadiga ah, -20-180
Codsiga: Isticmaalka guriga, Water Isticmaalka Warshadaha, Isticmaalka Warshadaha
Certificate: ISO9001, PED2014 / 68 / EU, ROHS, gaari, ATEX
Waxyaabaha Of qabtaan, SS304
Dhexdhexaad: Biyaha Oil Gas
Product Name: 3PC Ball Madax
Wax soo saarka: Cangzhou, Hebei, Shiinaha
Iyo meesha Asal ahaan: Cangzhou, Hebei, Shiinaha
Supply Kartida: 100Tons / Month
Certificate: ISO9001, PE2014 / 68 / EU, ROHS, gaari, ATEX
Port: Port Xingang
Cangzhou Co-Win Birta Products Co., Ltd
The 3-piece waalka kubada dekedda buuxa la sameeyey bir 304 oo uu leeyahay gacanka kabaalka iyo dhaddig National tuuboyinka gabogabaysmo (NPT) xidhiidhada labada daraf oo ku dhafnaa. Markaasaa waxaa taas ka mid ah waa ugu cuslaa ee waalka .
Taas oo uu leeyahay gacanka lever la darafta vinylalkohol ah buuga on / off gacanta ah.
Tani waalka kubadawaa dekedda buuxda khilaaf la dhimay, ay dhexroor hoose waa isku mid sida dhexroor iyo barxadda gudaha biibiilaha waxaa isku xira si ay awood oolnimada hawlgalka ugu badnaan.
Cadaadiska ugu badan waa 1,000 pounds halkii inch square loo isticmaalo biyo, saliid, iyo gaaska (WOG) oo kala duwan oo shaqo heerkulka uu yahay -20 - 180 ° C.
Waalka waa Wabka for xira labada tuubbo socday oo isku jiho ah oo uu leeyahay threads NPT labada dhamaado abuurayo shaabadood adag ka badan threads toosan. PTFE xoojiyeen kuraasta iyo shaabadihiisa yareeyo khatarta waalka baxsiga.
Waalka Tani waa in lagu isticmaalo khadadka biyaha, dhirta processing, iyo codsiyada beeraha.
Ball Qaliinkadib loo tixraaci karo dekedda sida buuxda ama dekedda hoos u dhacay (sidoo kale loo yaqaan dekedda caadiga ah ama caadiga ah) ku xiran tahay dhexroor iyo barxadda gudaha ah waalka.
A waalka kubada waa dekedda buuxa haddii godka kubada waa size la mid ah sida dhexroor hoose oo dhuumaha xira (taasoo keentay in khilaaf hoose) iyo waa la dhimay dekedda haddii godka ka mid ah waalka waa mid ka mid biibiile size yar biibiile, taasoo keentay in socodka yar iyada oo loo marayo waalka badan iyada oo loo marayo usheeda dhexe ee beebka.
Ball filtarka waxaa laga yaabaa inaanu ama lever in maadooyinka la booska kubada ee (furan ama xiran) hawlgalka buugan. Waxaa ugu horayn loo isticmaalo codsiyada hawada, gaaska, dareeraha, iyo uumi.
Waxyaabaha soo socda lagu ISO 9001 heerarka tayada. Waxaa had iyo jeer dhoofin in Europe iyo America.
1) Oo dabooli: 2000 mitir squre
2) Tirada shaqaalaha: 158 Emplyees
3) awooda Yearly: 1200Tons
4) waxyaabaha ugu waaweyn: waalka Ball, hubi waalka, waalka balanbaalis, ururka nadaafada, camlock iyo Qaybo ka OEM
5) Cadaadiska rating: Class 150/300/600/900 / 1500PN16 / 25/40/63/100/160
6) Waxyaabaha: CF8M, CF8, CF3M, CF3, WCB iyo qalab kale
Ku soo dhawoow in aad baaritaan!
Raadinta fiican Heaveriest Ball Madax-saaraha & qeybiyaha? Waxaan leenahay xulashada ballaaran ee qiimaha weyn inuu kaa caawiyo inaad hesho hal abuur leh. All 3 PC Ball Madax yihiin tayada damaanad qaaday. Waxaan nahay Shiinaha Asal Factory ee Heaveriest Madax The. Haddii aad qabto wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Categories Product: Qaliinka> Ball Qaliinka
Previous: Sii kordhaya Nooca suufka T 3Way Ball Madax
Next: 2PC Ball Madax Nooca II PN63
Tayada High 304 1PC Ball Madax
Ball Madax iyadoo gacanka Blue
1PC Ball Madax Iyadoo Balanbaalis taabta PN63
304 316 tuubada biiyaha tuubada 200PSI OD9.6mm
Mini Ball Madax F / F SS304 / 316
ahama 1000wogmale waalka kubada
Dhaqaale & Development Zone, Cangzhou, Hebei